कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को कुटीकुटी यसरी गरिएको थियो हत्या, को-को हुन् मार्ने प्रहरी अधिकृतहरु ? — Sanchar Kendra
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को कुटीकुटी यसरी गरिएको थियो हत्या, को-को हुन् मार्ने प्रहरी अधिकृतहरु ?
२०५९ सालको कुरा हो, मंगलबार राति हामीलाई स्रोतले फोन गरेर साउतीको स्वरमा भन्यो –‘कृष्णलाई त मा¥यो नि ।’ को कृष्ण ? उसले सबै भन्न सकेन ।
संकटकालको बेला थियो, सेना प्रहरी सबैले प्रेसलाई सताइराखेको अवस्था थियो, दरबार हत्याकाण्ड भएर ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएको वर्ष दिन पुग्दै थियो । हामीलाई यसरी सूचना दिने व्यक्ति कृष्ण सेन मारिएको ठाउँका प्रत्यक्षदर्शीमध्येकै प्रहरी अफिसर थिए ।
फोन आएपछि हामीले यस विषयमा छलफल गर्यौं । तर, कन्फ्युजन भयो । मारिएका व्यक्तिको नाम ‘कृष्ण’ मात्रै भनिएको थियो । जबकि पक्राउ परेका कृष्णहरु दुईजना थिए, एउटा कृष्णध्वज खड्का, अर्का कृष्ण सेन । हामीले त्यो हप्ता विस्तृत सूचना पाउन नसकेपछि समाचार लेखेनौं ।
अर्को हप्ताको सोमबार फेरि फोन आयो । स्रोतले भन्यो –‘तपाईहरु समाचार छाप्न डराउनुभएछ यार ।’ हामीले भन्यौं –‘किन डराउनु र, को कृष्ण भन्ने डिटेलमा भन्नुप¥यो नि ।’ उसले भन्यो –‘त्यो पत्रकार कृष्ण के त ।’ यसपछि भने मारिने व्यक्ति कृष्ण सेन नै रहेछन् भन्ने पक्का भयो । उनलाई जेठ ६ गते प्रहरीले पक्रिएको थियो । त्यो घटना थियो जेठ १३ गतेको ।
कृष्ण सेनको समाचार लेखेपछि जनआस्थामाथि चर्को प्रहार भयो । त्यतिबेला देवेन्द्रराज कँडेल गृहराज्यमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री थिए । हिरासतमा भएको मान्छेलाई मारेको भनिसकेपछि उनीहरुलाई सीपीजेबाट चर्को दबाव आयो । पत्रकार गोपाल बूढाथोकीलाई पनि त्यहीबेला सेनाले अपहरण गरेको स्थिति थियो ।
म भागीभागी हिँड्नुपरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वलसमशेरको समाचार लेख्दा मलाई पक्राऊ पनि गरियो । तत्कालीन सेनापतिसँग मेरो झगडै भयो, उनले तँलाई सुट गर्छु सम्म भने । पञ्चायतकालमा विमर्श पत्रिकाबाट शासकहरुलाई जस्तो अप्ठ्यारो थियो, त्योबेला जनआस्थाबाट उनीहरु त्यसैगरी आत्तिएको अवस्था थियो । त्यसपछि अकस्मात श्रीषा प्रकरण आयो ।
श्रीषा कार्की प्रकरणमा ४४ जना मुछिएका छन् । लोकमानसिंह कार्की पनि यसका एउटा पात्र हुन् । कान्तिपुरका साहुहरु पनि हुन् । केशव स्थापित र खुमबहादुर खड्का पनि हुन् । उनीहरु सबै मसँग आगो भइराखेका थिए । प्रदीपसमशेर आइजीपी थिए, राधाकृष्ण मैनालीका सम्धी त्यतिबेला डीआइजी थिए, उनीहरु सबैले भूमिका खेले ।
उनीहरुले जनआस्था बन्द गराउन खोजे, तर सम्भव भएन । कान्तिपुर पनि मेरा विरुद्ध लाग्यो, युवराज घिमिरे मेरा साथी सम्पादक थिए, तर उनको बसमा थिएन कान्तिपुर । अजय दासले मसँग २२ मिनेटको अन्तरवार्ता लिएका थिए, तर एक सेकेन्ड पनि प्रसारण भएन । उनीहरुले हाम्रो भनाइ कहिँ कतै प्रकाशित गरेनन्, एकोहोरो स्टोरी दियो । अहिलेको लोकमान प्रकरणमा पनि उनीहरु यसैगरी परिचालित भए ।
हामीले जोखिम मोलेर कृष्ण सेनको हत्यासम्बन्धी समाचार बाहिर ल्र्याए पनि हामीलाई माओवादी नेताहरुले सामान्य धन्यवादसम्म दिएनन् । बरु उल्टै हामीलाई सुराकी, दरबारिया आदि आरोप लगाउने काम गरे । माओवादीहरु आफू भलो त जगत भलो भन्नेखालका मान्छे हुन् । उनीहरुले यसमा हामीलाई जसरी हेरे पनि केही गुनासो छैन । किनभने हामीले व्यक्तिगत लाभका लागि सेनको हत्यासम्बन्धी समाचारमा जोखिम मोलेका थिएनौं ।
हामीले पत्रकारिताको धर्मनिर्वाह गरेका हौं, जोखिम मोलेका हौं । उनीहरुले धन्यवाद देलान् भनेर यो काम गरिएको होइन । स्रोतका अगाडि हामीले आफूहरु काँतर नरहेको देखायौं र उनले दिएको सूचनालाई सलाम गर्यौं । हामीले लेखेको समाचार सही सावित भयो । हामीले यो काम नगरेको भए अहिले पत्रकार कृष्ण सेनलाई माओवादीले बेपत्ताको सूचीमै राखिरहेका हुने थिए ।
कृष्ण सेन मेरा पनि साथी थिए । उनको आस्था र विचार जे भए पनि स्वाभाविक रुपमा एउटा पत्रकार त्यसरी मारिनु जघन्य अपराध हो । मरेको मान्छेलाई छातीमा गोली दागेर इन्काउन्टरमा मारिएको भनेर मुचुल्का तयार पार्नुजस्तो ठूलो अपराध अरु केही हुँदैन ।
(श्रेष्ठ जनअास्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ । जनअास्था साप्ताहिकले सेनकाे हत्याकाे समाचार पहिलाे पटक लेखेकाे थियाे । याे सामाग्री श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेर अनलार्इन खबरले चारवर्ष अघि तयार पारेकाे थियाे ।)
इच्छुकको हत्याबारे यस्तो थियो जनआस्थाले लेखेको समाचार
यस्तो थियो तात्कालिक सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन